DEG-DEG: Premier League Oo Shaaciyey In La Baajiyey Mid Ka Mid Ah Kulamadii Horyaalka Ee Toddobaadkan - Laacib
HomeWararka CiyaarahaDEG-DEG: Premier League Oo Shaaciyey In La Baajiyey Mid Ka Mid Ah Kulamadii Horyaalka Ee Toddobaadkan
DEG-DEG: Premier League Oo Shaaciyey In La Baajiyey Mid Ka Mid Ah Kulamadii Horyaalka Ee Toddobaadkan
Maamulka horyaalka Premier League ayaa shaaciyey in la baajiyey mid ka mid ah kulamadii la ciyaari lahaa Sabtida berri, kaddib markii Fayraska Korona iyo dhaawacyo ay isku raaceen mid ka mid ah naadiyada dhibaatada ugu badan haysato.
Bilihii November iyo December ayay baaqdeen kulamo badan oo horyaalka kaddib markii uu nooca cusub ee Fayraska Korona ee Omicron uu sida xun ugu faafay UK kaas oo naadiyada qaarkoodna sababay in laba illaa saddex ciyaarood loo baajiyo.
Hadda oo la moodo inuu soo yaraanayo Fayrasku, ciyaartii ugu dambaysay ee baaqatay ee Arsenal iyo Liverpool ee Carabao Cup na ay hadal-hayn iyo muran abuurtay markii la ogaaday in shaybaadhku uu natiijo been abuur ah soo saaray, ayaa waxa haddana maanta uu Premier League ku dhawaaqay in la joojiyey mid ka mid ah ciyaarihii toddobaadkan.
Ciyaartii horyaalka ee Sabtida ay ku ballansanaayeen kooxaha Burnley iyo Leicester City ayaan qabsoomi doonin, kaddib markii Burnley uu tiro ka mid ah ciyaartoydeeda kaga dhacay Fayrasku, isla markaana ay u raaceen dhaawacyo tiro badna.
Premier League ayaa Jimcihii maanta waxa war-saxaafadeed uu soo saaray uu ku sheegay in ciyaartaasi baaqatay oo waqti kale loo cayimi doono inay ciyaaraan labada kooxood.
Ciyaartan ayaa noqonaysa kulankii saddexaad oo xidhiidh ah ee Premier League ah ee Leicester City ka baaqata.
Burnley ayaa waxa ciyaartii FA Cup ay kaliya haysteen toddoba ciyaartoy, waxaanay kooxda da’yarta kaga soo dareen afar ciyaartoy oo shaxda koowaad ka mid noqday, taas oo Huddersfield Town u fududaysay inay garaacdo.
Kooxdan oo ku jira kaalinta 18aad ee miiska kala-sarraynta Premier League ayaa waxay ciyaartay 17 kulan halka naadiyada qaarkood ay min 21 ciyaarood dheeleen, sababta intaas oo ciyaarood uga baaqdeena waa Fayraska Korona.